Sin Archives — ခရီးစဉ်လီ
မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ မပါဘဲ
တိုင်းယခုပြီးတော့ငါသူတို့ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်ကပြောပါတယ်သူတစ်ဦးမှစကားပြောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအချိန်အတော်လေးမှန်သည်မဟုတ်စဉ်းစားဟန်. ငါဘာကြောင့်သူတို့ကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါ, သူတို့အပွစျမြားအပေါငျးတို့သအကြောင်းကိုပြောပြပါ, သူတို့ရဲ့ချို့ယွင်းချက်၏အားလုံး, သူတို့ကအတိတ်ကာလ၌ပြုကြပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူတက် messed အမှုအရာ. ငါသည်သူတို့၏အပွစျမြားအကြောင်းကိုသူတို့နှင့်အတူငြင်းဘယ်တော့မှ, ငါမူကားသူတို့၏ယူဆချက်အပေါ်ပြန်တွန်းကြပါ.
သူတို့ကအပြစ်တရားတစ်နည်းနည်းနဲ့ခရစ်တော်ထံသို့လာမယ့်ထံမှသင်တို့ disqualifies ကယူဆနေ, အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်စစ်မှန်တဲ့အခါ. အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်ထံမှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မပါဘူး; ကျွန်တော်သူ့ကိုမလိုအပ်အကြောင်းရင်းင်. ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလက်ခံမှစုံလင်သောကြည့်ရှုသည်အထိကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေလျှင်ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲစောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်.
အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးကိုးကားတ, ချားလ်စ် Spurgeon ကိုယျ့ကိုယျကိုမှရှာဖွေနေရပ်တန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်း, ယရှေုသညျမှရှာဖွေနေစတင်ရန်. သူကပြောပါတယ်:
"ဒီ! သငျသညျပွောဆို, 'ငါလုံလောက်တဲ့နောင်တရကြပါဘူး။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါလုံလောက်တဲ့ယုံကြည်ကြပါဘူး။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါအရမ်းမထိုက်တန်ဖြစ်၏။ ' 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာနေပါတယ်ဒါက. 'ငါရှာဖွေတွေ့ရှိမနိုင်,'' နောက်ထပ်ပြောပါတယ်, 'ငါမဆိုဖြောင့်မတ်သော။ ' 'ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ဖြောင့်မတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းပြောအတော်လေးမှန်သည်; ဒါပေမယ့်မည်သည့်အဘို့အကြည့်ဖို့အတော်လေးမှားယွင်းနေသည်. ဒါဟာ…
ဤသူသည်ငါပြုအင်တာဗျူးတွင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့. DG သူတို့ကိုတက်တတ်၏အဖြစ်ကိုငါအခြားဒေသများ post လိမ့်မယ်
Hip-Hop သိန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မှ ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အပေါ် Vimeo.